မဟာသင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ကိုလက်ရှိအတိုင်း ၁ဝရက်သာ ပိတ်မည်ဟု တာဝန်ရှိသူဖြေကြား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မဟာသင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ကိုလက်ရှိအတိုင်း ၁ဝရက်သာ ပိတ်မည်ဟု တာဝန်ရှိသူဖြေကြား
မဟာသင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ကိုလက်ရှိအတိုင်း ၁ဝရက်သာ ပိတ်မည်ဟု တာဝန်ရှိသူဖြေကြား
Posted by ကို သာ on Aug 7, 2012 in Myanma News | 17 comments
လသာမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြီးမြင့်က မဟာသင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ကို လေးရက် သို့မဟုတ် အကြတ်နှစ်ရက်ဖြစ်ပါက ၅ ရက်သာ ပြန်လည် သတ်မှတ်ပေးရန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းကို ယနေ့(ဩဂုတ်လ၆ရက်)ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၂ဝ ရက်မြောက်နေ့တွင် မေးမြန်းခဲ့ရာ သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည
်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးမောင်က လက်ရှိကောင်းမွန်တဲ့ အစဉ်အလာကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဦးကြီးမြင့်က မြန်မာနိုင်ငံသည် အစစအရာရာ နိမ့်ကျနေသေးသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားများ ပိုမိုတိုးတက်နိုင်ရန် အတွက် အကြောင်းပြကာ အထက်ပါမေးခွန်းကို မေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်။
သင်္ကြန်တွင်း ၁ဝ ရက် ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သည့်အတွက် ဧပြီလအတွင်းတွင် လုပ်ကိုင်ရသည့် အလုပ်များ တွင်ကျယ်မှုမရှိကြောင်း နှင့် ဧပြီလအတွက်
အလုပ်ကိုကြိုတင်ရှောင်ထားရကြောင်း ကျိုးကြောင်းပြ မေးမြန်းသွားသည်။
အလားတူ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း ရုံးပိတ်ရက် ၁ဝ ရက်ဖြစ်သည့်အတွက် အကျိုးကျေးဇူး ထူးထူးခြားခြားမရဘဲ ရုံးစောင့်ရသည့် အလုပ်သာ တိုးလာခဲ့ကြောင်း ဦးကြီးမြင့်ကဆိုသည်။
သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက် ၁ဝ ရက်သတ်မှတ်ခြင်းအား နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရက ၂၀၀ရ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၁၆ ရက်က ကြေငြာချက်အမှတ် ၁/၂၀၀ရ ဖြင့် ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အလုပ်ရှင်တွေကတော့ ရုံးပိတ်ရက်ကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းချင်ကြတယ် … ဖြစ်နိုင်လျှင် တလလုံး ပိတ်ရက်မရှိခိုင်းချင်ကြတယ် …
လခစား ဝန်ထမ်းတွေကတော့ရုံးပိတ်ရက်ရှည်လိုချင်ကြတယ် ။ Public holidays တွေတစ်ခါတစ်လေ … တနင်္ဂနွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလျှင် ….. နစ်နာတယ်လို့ ထင်ကြတယ် ။
လက်လုပ်လက်စား ၊ နေ့စား အလုပ်သမားတွေကတော့ …… ပိတ်ရက်တွေ ၊ တနင်္ဂနွေတွေထက် ၊ နေ့တိုင်း အလုပ်ရှိဖို့သာ စိတ်ဝင်စားကြတယ် ……. ။
ကုမ္ပဏီအတော်များများမှာ ခွင့်ခံစားခွင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ နိုင်ငံမို့လို့ …… ရက်ရှည်ပိတ်ရက်ကိုတော့ အရမ်းမျှော်လင့်မိပါတယ် … ဒါပေမယ့်လည်း … ပိတ်ရက်ကြောင့် …. အလုပ်တွေ နှစ်ဆတိုးပြီး ကြိုလုပ်ထားရတာမျိုး ၊ ပိတ်ရက်ပြီးလို့ …. အလုပ်တွေပိုလုပ်ရတာမျိုးတွေကြောင့်တော့ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စရာပေါ့လေ …… ။
ရက်ရှည်အားလပ်ရက်သတ်မှတ်ပေမယ့် ..မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကတော့ … လစာနှစ်ဆပေးပြီး အလုပ်ဆင်းခိုင်းတာမျိုးတော့ရှိတာကြောင့် .. လသာမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြီးမြင့်ရဲ့ တင်ပြမှုကို ရှုံ ့ချလိုက်ပါတယ် ။
အနော်တို့ရုံးမှာ ပတ်ဘလစ်ဟောလီးဒေးနဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတိုက်နေရင် ကြားရက်ထဲ တစ်ရက်အစားထိုးပိတ်ပေးတယ်
အဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပြောပုံက နှစ်ဆန်း၁ရက်နေ့တောင် အလုပ်ဆင်းရတော့မှာပဲ
ဝန်ထမ်းတွေ စိတ်ညစ်ပြီး အလုပ်မတွင်မှ ပိုဆိုးနေဦးမယ်
အားကျလိုက်ထှာအေ .. ခွိခွိ … ။
နာတို့ ရုံးကများ …. အဲ့လို စေတနာတွေချိယင် ဘုရားပွင့်မလားပဲ ……..။ ဟွန့် … ။
လူတွေကို … စက်ရုပ်သာသာ ခိုင်းချင်တယ် …. ၊ စိတ်ရော ၊ လက်ရော ပါးစပ်ရော ၊ မျက်စိ ၊ ဦးနှောက် ၊ တစ်ခါတစ်လေ ခြေထောက်ပါ အငြိမ်မနေရအောင် ခိုင်းတတ်တယ် …. ။
တာဝန်ဆိုတာကြီးကို လိပ်ခွံကြီးလို ထမ်းပြီး .. .. ရုန်းကန်နေရတဲ့ ….. အချိန်တွေ မုန်းလွန်းလှပါပြီ ။
တစ်ခါတစ်လေ .. အလုပ်က ခွင့်ယူပြီး တနေကုန်တနေခမ်း အိမ်မှာပဲ လှိမ့်ပိန့်ပြီး အိပ်တတ်ပေမယ့် …. နေ့လည်လောက်ဆို … မနေနိုင်တော့ဘူး .. အလုပ်ကို ပြေးလာမိတာပါပဲ … ။ ဒီရက်ပိုင်းတော့ …. တစ်ရာ့ကိုး တစ်ရာ့တစ်ဆယ် သာသာပဲ …… အေးအေး လူလူဖြစ်နေလို့ တော်သေးတယ် … ခွိခွိ
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်၊ သီပေါမင်း အရိုးအိုးသယ်ဖို့ကိစ္စ အဲ့ဒါထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေမရှိတော့ဘူး လားလို့ ဒီလူတွေကိုမေးကြည့်ချင်တယ်။
ဦးကြီးမြင့်ရေ ခင်ဗျားက ကြီးပြီး မြင့်လို့သာပဲနှော်။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတက်စေချင်ရင် မီးကိုမှန်အောင်လုပ်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကို ကောင်းအောင်လုပ်၊ မြေယာဈေးတွေကျအောင်လုပ်ဗျာ။ ၁ဝ ရက်ပိတ်လိုက်လို့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဘယ်လောက်ကျသွားမှာမို့လို့လဲ။
“အကျိုးကျေးဇူး ထူးထူးခြားခြားမရဘူး ” ဟုတ်လား မင်းကသေက်ရူးပဲ။ နယ်မှာမိန်းမရှိတဲ့သူတွေ ပြန်ပြီး မိန်းမနဲ့ ၁ဝ ရက်အိပ်လို့ရတယ်ဗျာ … ကဲရှင်းပြီလား
ရက်ရှည်ပိတ်တာမပိတ်တာထက် သကြန်ဆိုဝန်ထမ်းအားလုံးနယ်ပြန်ကြလို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အပိုင်းကိုဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်။ နှစ်တိုင်းဝန်ထမ်းတွေသကြန်ပိတ်ရက် နယ်ပြန်ရင်(နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာကြာကြုံတွေ့နေရတဲ့ )ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကို ပြေလည်စေချင်ပါတယ်။
ခက်ခဲရုံတင်မကဘူး ကားခဈေးကလဲတက်သေးတယ်။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကားဂိတ်တွေ။ လက်မှတ်မှာရေးတော့တစ်ဈေး ပေးရတော့ တစ်ဈေး နဲ့ အဲ့ဒါကိုလဲ သေသေချာချာ အရေးယူသင့်တယ်။
အရေးယူတဲ့နည်းလမ်းဟာမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ အရေးယူလိုက်ရင် မှောင်ခိုဈေးကွက်ပုံစံ့ဖြစ်သွားနိုင်ပြီး ထွက်ကားတွေပိုနည်းပြီး လက်မှတ်တွေပိုခက် ပိုဈေးကြီးသွားနိုင်မယ်ထင်တယ်။ ပိုဆိုးသွာနိင်မယ်ထင်တယ်။ ပေါ့စေလိုလို့ကြောင်ရုပ်ထိုးကာမှဆေးအတွက်ကြောင့်လေးသလိုဖြစ်မှာစိုးမိပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ဟာ အပြန်လက်မှတ်အတွက် demand အရမ်းများနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ supply ကို supply လုပ်တဲ့သူလည်းထိုက်သင့်တဲ့အမြတ်ရအောင် ဘယ်လိုတိုးသင့်လဲဆိုတာမျိုးကပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြန်မဲ့စက်ရုံတွေကဇုံရုံးတွေမှာပြန်မဲ့မြို့စာရင်းယူတာမျိုး။ ဒီရက်ပြန်ကြမဲ့ကားကြုံတွေရှိရင်ကြော်ငြာပေးတာမျိုး စသည်ဖြင့်ပေါ့။ လူအရမ်းများတဲ့အတွက်ရထား ကပိုအဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်တယ်။ တဆင့်တော့စီးရမှာပေါ့။
သင်္ကြန်မှာ နယ်ကလူအများစု နယ်ပြန်ကြတော့ ကားခတွေလဲ မတန်တဆဖြစ်၊ ကားစီးဖို့လဲ ခက်ခဲပါတယ်။
အဲဒါကို ဖြေရှင်းပေးချင်စိတ်ရှိရင် လွယ်ပါတယ်။
ကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးက အရေးကြီးပြီဆိုရင် ကားဘီးဖက်လိုက်ရ လိုက်ရ ဂျီးမများဘူး။
ဒါကြောင့် သင်္ကြန်အကြိုမတိုင်မီတရက်၊ သင်္ကြန်အကြိုနေ့၊ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့နဲ့ နှစ်ဆန်းနှစ်ရက်နေ့တွေမှာ ဘီးပါတဲ့ယာဉ်မှန်သမျှ ဘယ်လမ်းခရီးကိုမဆို အခကြေးငွေယူပြီး အကန့်အသတ်မရှိ လူတင်ပြေးဆွဲခွင့်ပြုလိုက်…
ဈေးကွက်စီးပွားရေးကို တကယ်ယုံရင် စမ်းကြည့်လို့ရတယ်..။
ကားခဈေးမကြီးဘို့နဲ့ သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေသွားဘို့ ကျုပ်အာမခံရဲတယ်..။
လောင်းမယ်ဆိုလဲ ကြိုက်တဲ့ကြေးနဲ့ လောင်းရဲတယ်….။
ဦးပါလေရာအကြံက တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ ဘီးပါတဲ့ကားတွေလူတင်ပြေးဆွဲခွင့်ပြုရင်လည်း demand ဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်ရှိတ ဘယ်မြို့ပြန်မှာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ် ဆိုတာမျိုးဒေတာလေးတိကျရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ နယ်မြေအလိုက်စုရပ်တွေသတ်မှတ်ပေးဖို့ဆိုတာမျိုးပါ။
ကျွန်တော်က တဖက်စွန်းကို လုပြောတာ နဲနဲများသွားတယ်…
တကယ်တော့ဗျာ.. လုပ်ရမှာက ရှင်းရှင်းလေးပါ…
ဥပမာဗျာ ရန်ကုန်-မန္တလေးကြားမှာ အသွားအပြန် ကားအစီးတစ်ရာလောက် ထွက်ပေးလို်က် ဆိုတာမျိုးပေါ့နော…
တကယ်လုပ်ပေးပြီးမှ အဆင်မပြေတာ ပြေတာထား…
ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးဘို့ကြိုးစားတာကို ကျွန်တော့်တသက် မတွေ့ဖုူးသေးဘူး…
အစိုးရဆိုတာ ဘာလုပ်ဖို့ အစိုးရအမည်ခံပြီးလခယူထားမှန်းမှ သိရောသိကြရဲ့လားမသိ…..
ဘယ်နှရက်ပဲ အစိုးရက သတ်မှတ်သတ်မှတ် ကိုယ်တွေ ရုံးက သင်္ကြန်တွင်းပဲ ပိတ်တယ်။ ကျန်ရက်ကတော့ အမြဲပုံမှန်ဆင်းရတယ်… စိတ်လေတယ်သိလား…
စနိုးအဖြစ်ထက်သာပါသေးတယ် မမမနောရယ် ဟုတ်ပါ့ ပိတ်ရက်ကသင်္ကြန်ရက်ကလွဲလို နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တောင်အလုပ်ဆင်းရပ့ါ။။
ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်နှစ်ကို တစ်လလောက်၊
တစ်ပတ်နှစ်ရက်ကို ဗုဒဟူး၊တနင်္ဂနွေ ပိတ်စေချင်ပါတယ်။
ဦးကြီးမြင့် က ကြည့်ရတာ မိသားစုနဲ့မတည့်တဲ့သူဖြစ်မယ်၊ ပိတ်ရက်ရှည်လို့ အိမ်မှာနေ မရတဲ့အတူတူ ရုံးဖွင့်ပြီးသွားထိုင်နေချင်တဲ့သူမျိုးလားမသိဘူး။ သူတင်ပြတာလည်း ဘယ်မြို့နယ်၊ ဘယ်တိုင်းက ပြည်သူ့ကိုယ်စား တင်တာလည်းမဟုတ်၊ သူ့စိတ်ကူးနဲ့ရမ်းတင်တာ၊ သူရွေးချယ်ခံရခဲ့တဲ့ မဲဆန္ဒမြို့နယ်မှာ သူတင်ခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်ပြင်မည့်ကိစ္စချပြပြီးလူထု ဆန္ဒအရင်ယူကြည့်ရင်တောင် အဲဒီထဲက သူ့အဆိုပျက်နိုင်တာ သူမသိရော့လေလားကွယ်။
လသာမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြီးမြင့်က မဆလ သွေးမကုန်သေးဘူးထင်တယ် ။
အစိုးရ အကြိုက်လိုက်ပြောရင် နေရာရမယ်ထင်နေတုန်းဘဲလား ။
သူမှားနိုင်ငံတချို့မှာ အလုပ်သမားတွေအတွက် အခွင့်အရေးကို လွှတ်တော် ကိုယ်စလှယ်တွေက တောင်းဆိုပေးကြတယ်။ ဒီအသုံးမကျတဲ့ဟာမျိုးကြီးက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ ကိုယ်စလှယ်အနေနဲ့ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်နေတာလဲ ။မောင်းထုတ်လိုက်ကြပါ ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတခုတည်းသောပိတ်ရက်ရှည်ဖြစ်လို့ မိသားစုနဲ့ အေးချမ်းစွာနေပြန်လည်ဆုံတွေ့နေထိုင်နိုင်မဲ့ တနှစ်တခါ အခွင့်ရေးကို ဝန်ထမ်းတိုင်းက လိုလားတောင့်တကြမယ်ထင်ပါတယ်။